‘नाई न भन्नु ल’ को पहिलो रोजाई केकी ! - Experience Best News from Nepal
‘नाई न भन्नु ल’ को पहिलो रोजाई केकी !
प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ ४, २०७५
आफ्नै निर्माण रहेको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’बाट व्यवसायिक लाभ उठाउन नसकेकी अभिनेत्री केकी अधिकारीको अभिनय ‘नाईं नभन्नू ल ५’ मा पनि देख्न सकिन्छ । निर्माण युनिटले प्रदर्शन मिति नजिँकिदै गर्दा चलचित्रमा अभिनेत्री उनको पनि अभिनय रहेको सार्वजनिक गरेको हो ।
केकीको अभिनय सिरिजको पाँचौ श्रृखलामा रहेको सार्वजनिक गर्दै निर्देशक आचार्यले पहिलो सिरिजको प्रस्ताव पनि दिएको खुलाएका छन् । ‘पहिलो शृंखलामै हिरोइनका लागि आग्रह गरेको थिए । त्यो सम्भव भएन । फेरि तेश्रो शृंखलामा पनि अफर गरेका थिए । केकी सोही समयमा अर्को चलचित्रमा व्यस्त थिइन् । निर्देशक विकासले भने– ‘जब ५ को अफर दिए उनले स्वीकारिन् ।’
विकासको कुरो जस्तै केकी पनि भनाई रहेको छ । ‘विकास अंकलले पहिलो चलचित्र देखिनै मलाई सम्झने गर्नुभएको थियो । विविध कारणले गर्न पाएको थिइँन । तर फेरि ५ मा काम गर्ने अवसर आयो’ केकीले भनिन् ‘मैले एक सेकेन्ड मै हुन्छ भने । मलाई आफ्नै चलचित्र तयार गर्ने प्रेसर त थियो । त्यसका बाबजुद पनि यो पालाचैं नछाडने निर्णय गरे ।’
‘हाम्रो लागि नाईं नभन्नू ल एउटा परिवार हो । परिवारको अंग बन्न पाउँदा निश्चयनै एक्साइटेड थिएँ’ केकीले थपिन्– ‘एकचोटि काम गर्न नमानेको कलाकारसँग निर्माता निर्देशकले इगो लिएर दोस्रो पटकदेखि कुरै गर्दैनन् । ‘तर विकास अंकलले कहिल्यै मेरो इन्कारलाई त्यसरी लिनुभएन । यही कारण हो, पाँचमा हामीले सँगै काम गर्यौं,’ केकीले सुनाइन् ।
८ भदौबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रमा केकीका अलावा निरुता सिंह, दिलिप रायमाझी, प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का आदि कलाकारको अभिनय रहेको छ । चलचित्र देशभरका सयभन्दा बढी पर्दाबाट रिलिज हुँदैछ ।
केकीको अर्को प्रस्तुति चलचित्र कन्याकुमारी!!
बिपिन कार्की :आफ्नो फिल्म क्षत्रको अनुभूति समेट्दै पुस्तक लेखनमा !
अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘क्याप्टेन’ को अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक
Keki Adhikarinai na nannu la 5Nepali Movie
नेपाली चलचित्रमा सर्वाधिक मोटो पारिश्रमिक लिने यी कलाकार, कस्को पारिश्रमिक कति ?
अमेरिकामा सुहाना थापा संग रोमाण्टिक मुडमा अनमोल (तस्बिरहरु)
फिल्म लाइनमा अनमोलले लगाउदै छन् ब्रेक, ब्याचलर बन्टी नबन्ने फाइनल!! किन?
यी हुन् प्रियंका कार्कीका मनपर्ने बलिउड स्टार !!
जब भयो चार सुपरस्टारको जम्काभेट !!
एक कारण जसले बनायो आना शर्मालाई विवादित !! जान्नुहोस के रहेछ कारण